Xavi Hernandez oo doortay kan fiican saaxiibadiisii hore kooxda Barcelona ee Ronaldinho iyo Messi – Gool FM
Dajiye April 5, 2020
(Barcelona) 05 Abril 2020. Halyeyga reer Spain iyo kooxda kubadda cagta Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa kala doortay kan fiican saaxiibadiis hore naadiga Blaugrana ee Lionel Messi iyo Ronaldinho.
Xavi Hernandez ayaa aaminsan in Lionel Messi uu ka fiican yahay halyeeyga reer Brazil ee Ronaldinho, wuxuuna sidoo kale ammaan u jeediyay xiddigo kale uu ka mid yahay Cristiano Ronaldo.
Xavi ayaa kaga soo garab ciyaaray Lionel Messi iyo Ronaldinho safka kooxda Barcelona, sidaas darteed wuxuu si weyn u ogyahay awoodooda ciyaareed, laakiin kabtankii hore Blaugrana ee Xavi ayaa ku adkeystay in Messi uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda.
Wargeyska “Sport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Halyeyga reer Spain iyo kooxda kubadda cagta Barcelona ee Xavi Hernandez, waxaana uu yiri:
“Aniga ahaan, Ronaldinho wuxuu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan adduunka taariikhda oo dhan, waxaana u maleynayaa in kaliya ay ka maqneyd inuu joogteeyo heerkiisa ugu sareeya”.
“Aniga ahaan, Lionel Messi ayaa ka fiican Ronaldinho haddii aan ka eegno dhanka horumarka. Messi xaqiiqdi waa kan ugu fiican taariikhda, halka Rooney uu ku sugan yahay isla aaga ay ay ku jiraan ciyaartoy kale sida Ronaldo de Lima iyo Cristiano Ronaldo”.
“Aniga ahaan, Lionel Messi ayaa wax walba ka sarreeya.” Ayuu hadalkiisa ku soo xiray Halyeyga reer Spain iyo kooxda kubadda cagta Barcelona ee Xavi Hernandez.